SUPERBAHİS983 İSPANYOL BASINI: ATLETİCO MADRİD'E ARDA GİBİSİ GELMEDİ - SÜPERBAHİS630.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS983 İSPANYOL BASINI: ATLETİCO MADRİD’E ARDA GİBİSİ GELMEDİ
November 11, 2020 SÜPERBAHİS KAYIT SÜPERBAHİS GİRİŞ 4
Arda Turan, onye buliri ụgbụ na egwuregwu Sivasspor-Galatasaray na-egwu n’izu nke 8 nke Super League, enweghị ike ịkwụsị anya mmiri ya mgbe egwuregwu ahụ gasịrị.
Ọganihu a nke onye ọkpụkpọ nwere ahụmahụ bụ onye meriri ihe mgbaru ọsọ na ụdị Galatasaray mgbe afọ 9 gasịrị ghọrọ akụkọ na Spain.
Akwụkwọ akụkọ Mundo Deportivo kwuru banyere ụdị Arda Turan ” Arda dị afọ 33 enwetaghachila ezigbo ụdị ya na Spain.
El Espanol, n’aka nke ọzọ, jiri okwu ndị pụtara ìhè mgbe ha na-eme nyocha zuru oke gbasara Arda.
“Ọ BEAGH L KA ARDA”
Akwụkwọ akụkọ Spanish, na-echetara ụbọchị Arda Spain ” Ọ bụghị naanị na obi dị m ụtọ ile ya anya maka Atletico de Spain maka Turkey. Ezigbo ndị na-eche nche, ndị egwuregwu siri ike, ndị na-eti ihe na ndị isi bịara n’òtù ahụ, mana enwere mmadụ ole na ole dịka Arda Turan … “ eji okwu.
Ndị Spain, ndị tụlere mbufe Arda na Barcelona mmalite nke njedebe ‘, kwuru:’ ‘Arda na Barcelona abụghị Arda na Atletico. Ọ pụghị ịbịa onwe ya mgbe Barcelona gasịrị, mana ọnọdụ ya na Atletico dị iche. ” E kwuru.
Arda Turan enweghị ike ịkwụsị anya mmiri ya – WATCH
Elpanol, na-enyocha arụmọrụ nke aha afọ 33 na Galatasaray, jiri okwu ndị a;
“Ibe ákwá dị ka ILM CHAKA”
” Ugbu a ọ dị ka ọ na-enwe ọ footballụ na football ọzọ. Ihe mgbaru ọsọ o nyere mgbe ihe dị ka ụbọchị 1000 bụ ihe atụ doro anya nke a. Ọ hụbeghị ọ thisụ a ogologo oge. ”
” O nwetara ọ joyụ nke ihe mgbaru ọsọ ya n’ụzọ na-enweghị isi, o tiri mkpu dị ka ụmụaka. Ikekwe arụmọrụ a bụ nzọụkwụ mbụ nke nlọghachi ya na Fatih Terim, onye kwenyere na ya nke ukwuu … ”
SUPERBAHİS746 MOBİL BAHİS ÖDÜL SUPERBAHİS983 SAMATTA’NIN GOL SUSKUNLUĞU DEVAM EDİYOR SUPERBAHİS983 SİVASSPOR-GALATASARAY – CANLI SKOR SUPERBAHİS746 CASİNO OYNAYARAK KAZAN SUPERBAHİS746 ÖDÜYOR MU SUPERBAHİS983 VİNCENT ABOUBAKAR SADECE 1 GOL ATABİLDİ SUPERBAHİS983 JOSHUA KİMMİCH İLK YARIYI KAPATTI SUPERBAHİS983 JOSE MOURİNHO: HAKEMLER DE BASIN TOPLANTISINA KATILMALI SUPERBAHİS983 AMELİYAT EDİLEN DİEGO MARADONA’NIN SAĞLIK DURUMU SUPERBAHİS983 BRENDAN RODGERS: ÇAĞLAR’IN İYİLEŞME SÜRECİ İYİ GİDİYOR SUPERBAHİS991 CASİNO MASALARI SUPERBAHİS983 BÜLENT KORKMAZ: ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ DE KAZANABİLİRDİK SUPERBAHİS746 HOŞGELDİN PROMOSYONU SUPERBAHİS746 TUTTUR ORANLARI SUPERBAHİS983 NAZIM SANGARE: GÖKHAN GÖNÜL’E FORMAYI BİR DAHA VERMEM SUPERBAHİS746 CANLI İZLESENE SUPERBAHİS983 YÜKSEK ORANLI BAHİS SİTELERİ SUPERBAHİS746 CANLI CASİNO SUPERBAHİS746 BAHİSLE KAZANÇ SAĞLA SUPERBAHİS983 SALZBURG MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEYECEK
4 Comments on SUPERBAHİS983 İSPANYOL BASINI: ATLETİCO MADRİD’E ARDA GİBİSİ GELMEDİ
HİCRAN November 12, 2020 at 4:50 am
süperbahis giriş günlük ödeme yapıyor mu
ZEYNEP November 13, 2020 at 10:30 pm
süperbahis canlı bahis sıkıntılı bir site bu ya
MUSTAFA November 18, 2020 at 2:50 pm
süperbahis giriş ödeme yapmassanız nolacak
BİLGE November 18, 2020 at 7:20 pm
süperbahis canlı casino mobil casino oynayacağınız hızlı site ile kazanmak mümkün.